saka, kana uchida kuenda vamwe zvakanaka zuva nzendo kubva Amsterdam, unofanira kusarudza zvakanaka nzvimbo. Munyaya ino, isu kuchazadza pamusoro shanu zuva nzendo unogona kutora Amsterdam. wo, isu vachakupai zvose ruzivo zvaunoda pamusoro uye sei kusvika nzvimbo idzi nechitima. Pakazopera chigamba, iwe unenge uine zvese zvaunoda kuti utange chiitiko chinoshamisa muAmsterdam!
Kubva zuva rose nzendo kubva Amsterdam unogona kutora, Hague ndomumwe kuti haafaniri uchashayikwa. Chikonzero chikuru chayo ndechekuti Hague nderimwe remaguta akakosha muNetherlands. Uyewo chimwe chezvinhu wakanaka.
The Hague ndiye chigaro hurumende muNetherlands, saka unogona kutarisira kuona zvakawanda zvivako fadza. The guta ndiyewo nzvimbo reInternational Court of Justice, inova imwe unofanirwa-kuona nzvimbo.
Kunyange zvazvo zviri izvo, Germany achiri unokosha kushanyira. Izvozvo ndezvechokwadi zvikurukuru kana ukasarudza kuenda Cologne, chinhu kazhinji akanganwa dombo rinokosha West Germany. Zvikuru guta nhema pamahombekombe ari zvakafanana kwazvo Rhine River. Chii chimwe, Cologne ndiyo musimboti wehupfumi, tsika nemagariro, uye ushanyi pamusoro West Germany.
Kana ukasarudza kuenda kuguta rino hunoshamisa, uchava zviuru zvemakore zvenhoroondo kuyemura. Pakati chaipo peguta pane a kereke huru. Zviri chimwe chezvinhu hunoshamisa nzvimbo dzokunamatira muchawana kuona yose Europe.
Unoda embed yedu Blog romukova “5 Day Best Trips From Amsterdam By Train” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/best-day-trips-amsterdam/?lang=sn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Masikati europetravel Train Travel travelamsterdam travelbelgium travelengland travelgermany travelnetherlands travelparis